Apple yakatongerwa kubhadhara zvinopfuura mamirioni mazana mashanu pakushandiswa kwemvumo yeLTE muApple Watch | Ndinobva mac
Makore mashoma apfuura, aive Apple uyo akapedza gore rese achishora chero kambani yaipa kana kuwedzera zvinoshanda zvakafanana neizvo isu zvataigona kuwana mune mamwe emidziyo yavo. Sezvo makore apfuura, tortilla yatendeuka y Apple yave tarisiro yemakambani mazhinji, mamwe acho anozivikanwa se patent trolls.
Nhau dzichangoburwa dzine chekuita nemhosva yakapihwa naApple, inotiratidza kuti kambani yaTim Cook yakapihwa mutongo wakadii kubhadhara $ 506 miriyoni yekutyora dzakasiyana patent pachinzvimbo chePanOptis nedare remakurukota ehurumende kubva kuEastern District yeTexas. Aka kaive kekutanga mu-munhu patent kutongwa kwayakabata kubvira denda re COVID-19.
Iyi mhosva yakatarisa pane akati wandei Optis Wireless patent, ese iwo zvine chekuita nekushandiswa kweLTE tekinoroji pane iyo Apple Watch, iPhone uye iPad. Munguva yekutongwa, Apple yakaedza zvisina kubudirira kuratidza kuti yakanga isina kukanganisa tekinoroji yeApple patent yekubatanidza kune LTE network.
Optis Wireless yakataura kuti yakanga yapa rezinesi rekushandisa pasirese kushandisa marateti ayo ane chekuita neLTE kuzadzisa zvisungo zvayo, zvine musoro uye zvisina rusarura Nekudaro, kunyangwe uchinge wabata neApple kakawanda, kutaurirana hakuna kubudirira uye vakamanikidzwa kuendesa nyaya yacho kumutongi.
Apple yakataura kuti vaigona kuona mukati meiyo iPhone kuti vaone kuti ma patents ekambani iyi anga asina kukanganiswa sei chero nguva, pamusoro pekutaura kuti kuenderana kweiyo iPhone, iPad neApple Watch nemambure eLTE, semamwe mafoni, mapiritsi uye smartwatches pamusika, hwakanga husina kukwana humbowo hwekutyorwa.
Iyi nharo yanga isina kukwana uye vatongi vakaona kuti Apple yakanga isina kuratidza kuti Optis Wireless 'patent zvirevo zvaive zvisina basa, mutongo Apple kubhadhara $ 506.200.000.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple yakatongerwa kubhadhara zvinopfuura mamirioni mazana mashanu pakushandiswa kwemvumo yeLTE muApple Watch
Apple inosvika pachibvumirano nekambani yekugadzira yaMartin Scorsese kuti igadzire zvirimo